निर्वाचनमा शीर्ष नेता को कहाँ व्यस्त ? यस्तो छ कार्यतालिका – Etajakhabar
निर्वाचनमा शीर्ष नेता को कहाँ व्यस्त ? यस्तो छ कार्यतालिका
काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा : कैलाली र कञ्चनपुरमा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न देउवा शुक्रबार पश्चिम लागेका छन्। शुक्रबार डोटी र अछामको कार्यक्रममा सहभागी भएका उनी १७ मंसिरदेखि निर्वाचनको दिनसम्म आफू उम्मेदवार रहेको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा रहनेछन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली : बुधबार झापा पुगेका ओली चार दिन आफ्नै क्षेत्र नम्बर ५ मा केन्द्रित हुनेछन् । आइतबार मोरङ–३ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चितवन-३ मा हुने सभालाई सम्बोधन गरेर काठमाडौं फर्कने उनको कार्यक्रम छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड : निर्वाचन नसकिएसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन-३ नछाड्ने भएका छन् । उनले निर्वाचनको मौन अवधि सुरु नभएसम्म घरदैलो कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिनेछन्।
एमाले नेता माधव नेपाल : नेता नेपाल आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं २ मा केन्द्रित भएका छन् । उनी शुक्रबार र शनिबार कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुरमा घरदैलोमा सहभागी हुनेछन् । बिहीबार उनले साँखुमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे।
एमाले शीर्ष नेता आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरू बुधबारदेखि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त हुन थालेका हुन् ।
दुई सातासम्म देशव्यापी चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न देश दौडाहमा सक्रिय भएका अध्यक्ष ओली बुधबार झापा पुगेका छन् । बुधबार एकै दिन ओलीले झापाका दुईवटा भेलालाई सम्बोधन गर्नुका साथै मतदातासँग भेटघाट गरेका छन् । चार दिन आफ्नै क्षेत्रमा केन्द्रित हुन झापा झरेका ओली १७ मंसिरमा मोरङ–३ र चितवनमा हुने सभालाई सम्बोधन गरेर काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ । एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल पनि अफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित भएका छन् । नेपालले बिहीबार काठमाडौं साँखुमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्दै छन् भने खनाल पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र इलाममा घरदैलोसहितको अभियानमा व्यस्त छन् ।
एमाले नेताको पाँचदिने कार्यतालिका केपी ओली
गौतम र पोखरेल पनि आफ्नै क्षेत्रमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि चुनावी क्षेत्रमा नियमित घरदैलो, मतदाता भेटघाट र कोणसभाजस्ता कार्यक्रममै व्यस्त देखिएका छन् । गौतमले बुधबार बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन् । बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार पनि गौतम चुनावी क्षेत्रमै केन्द्रित हुने उनका सहयोगी दीपक टमटाले बताए । उता, महासचिव पोखरेल पनि चुनावी क्षेत्र काठमाडौं–५ मै केन्द्रित भएका छन् ।
निर्वाचनसम्म प्रचण्डसहित शीर्ष नेताले निर्वाचन क्षेत्र नछोड्ने दोस्रो चरणको निर्वाचन नहुँदासम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका शीर्ष नेता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित हुने भएका छन् । निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने समय जम्मा चार दिन मात्र बाँकी भएकाले माओवादी केन्द्रका नेताले धेरैजसो समय आफ्नैे निर्वाचन क्षेत्रमा बिताउने भएका हुन् । २१ मंसिरको निर्वाचनका लागि १८ गतेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै छ ।
महराले घरदैलोलाई प्राथमिकता दिने दाङ–२ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त भएका छन् । निर्वाचनसम्मै महराले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको घरदैलो, भेला र भेटघाटमा बिताउने निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक हेमराज शर्माले बताए । मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटेर मतदाताका कुरा सुन्दा प्रभावकारी हुने भएपछि यस्तो रणनीति अपनाएको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
रायमाझीले जिल्ला नछोड्ने अर्घखाँचीबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार टोपबहादुर रायमाझी पनि निर्वाचनसम्म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहने भएका छन् । यो समय निर्वाचनका लागि एकदमै महत्वपूर्ण भएकाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नछोड्ने रायमाझीले बताए । अन्य उम्मेदवारजस्तै रायमाझीले कोण सभा, भेला, घरदैलो गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । आफू दैनिक बिहान ५ देखि राति ९ बजेसम्म निर्वाचन अभियानमा लागेको रायमाझीले बताए। परिणाम नआउँदासम्म मातृकाले निर्वाचन क्षेत्र नछोड्ने धनुषा-१ का उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले निर्वाचनको परिणाम नआउँदासम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नछोड्ने योजना बनाएका छन् । मतदानपछि गडबड हुन सक्ने भएकाले अति आवश्यक कामबाहेक अरू समय आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बिताउने यादवले बताए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १६, २०७४ समय: १०:०१:५५
भीषण वर्षापछि आएको ‘पहिरोमा परी १३ जनाको मृत्यु , चार बेपत्ता खोजी कार्यका लागि छ सय सैनिक परिचालन
चार वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिनुभएको चन्दन आजदेखि पशुपतिनाथमा चढाइने
कसरा हात्तीसारमा तमरकलीले भाले छावा जन्मायो,वर्ष शुरु भएयता तीन हात्तीले बच्चा जन्माए
समाजका डरले सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्दो
नीता, परमिता र बुद्धि अभिनित चलचित्र ‘दि कर्मा’को रिलिज डेट सारियो, कहिले प्रदर्शन हुने भयो त ?
दिपिकालाई यसरी फ्यानले घेरेपछि दीपिकाको ‘बडीगार्ड’ बन्दै रणवीरले दिए सुरक्षा , यी तस्विर बने भाइरल
गयो शक्तिशाली भूकम्प,क्षतिको विवरण आउन बाकि
यी निर्दयी शिक्षकले ७ वर्षका बालकमाथि अन्धाधुन्द कुटपिट गरी गरे यस्तो व्यवहार , यसरी निर्दयी तरिकाले कुट्दा पनि घरमा भएका मातापितालाई पत्तै भएन (भिडियो)